Ìhè anam-elu maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anya
ị bụ ebe a: Home ihu Ọgwụ Ìhè anam-elu maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anya
Onye ọ bụla na-eto eto expressive green anya anya isi bụghị nanị ụkọ nke ndị dị otú ahụ a hue, kamakwa ndị eke playfulness echiche, nakwa dị ka ọkaibe ìhè omimi. Green anya-atụle ga-a n'ezie Ga maka ọ bụla eme na-elu ọgụ egwu na stylist, n'ihi na anam-elu ha bụ oké ụzọ na-enwe ịchọpụta. ọbụna ìhè anam-elu maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anya Ọ na-adịghị e ji naanị otu na agba palette nke onyinyo, na-emekwa ka o kwe omume ime ihe dị iche iche usoro nke anam-elu.
The akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ-eyed mara mma na-ele anya oké na eke kwa ụbọchị etemeete, na obvorožitel'nym ​​smoki-ajz. Otú ọ dị, ka e mesiri ike na ọdịdị nke ndị a nti ido ga-ezi ma na a n'echiche nke imeru ihe n'ókè. Naanị na nke a, o nwere ike mesie eke mara mma nke a obere anya, na akọ zoo adịghị emezi emezi ẹdude ịkpụ na udi nke anya, ọ bụrụ na ha adị.
Easy-adị kwa ụbọchị etemeete
Ọ bụghị onye ọ bụla nke mara nma mmekọahụ na ngwá e nwere oge zuru ezu maka, na-enwe ike na-emefu ya na a ikpọ anam-elu. Otú ọ dị, enwela obi nkoropụ, ọ na-mgbe na-abịa na a enweghị oge iji nyere dịkarịa ala expressive na adabako ìhè anam-elu maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anya. Ọzọkwa, зеленоглазым красоткам вовсе не обязателен кричащий макияж на основе ярких тонов. Естественный дневной макияж для зеленого оттенка глаз можно нанести всего лишь за 10-20 nkeji. n'ihi na nke a:
Na ọnụnọ nke obere ntụpọ na akpụkpọ, ha na-agbazi site agbazi site ntụpọ usoro (agbazi na-etinyere naanị ebe nke anụ ntụpọ).
Mgbe ahụ Korzh ga-ejupụta n'ihe a mkpa oyi akwa nke ntọala ma ọ bụ ntụ ntụ.
Mgbe na-eke ọbụna akpụkpọ ụda kwesịrị gawara na cheekbones.
Nke elu nkuchianaya kpuchie onyinyo Mkpa ọkụ ndo. Mmasị na-atụ aro na-enye olive, aja aja ma ọ bụ aja aja-aj u.
The mpụga nkuku nke anya na-pụta ìhè na-enyemaka nke onyinyo, ọtụtụ aj u bụ intensively ndọkwasi. Paragraf a ga-esi nnọọ mkpa n'ihi na ndị inyom na almond ekara anya udi.
Site n'enyemaka nke eyeliner shades nke chocolate ẹkenịmde a mkpa akara tinyere adịghị mma akara.
Mezue image nke ozu eji ọchịchịrị isi awọ ma ọ bụ nchara nchara tint.
Iji nye ndị ahụ chọrọ n'onwe ìhè eme na-elu ose, i nwere ike inwe onyinyo chawapụrụ na agba.
Mgbe na-eji oyi na agba nke eke etemeete maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anya ka mma anwụrụ lilac shades, Fuchsia ae, na jupụta pink na ọla-ọcha-aj u. Ọ bụrụ na n'ozuzu agba atụmatụ bụ na-ekpo ọkụ, ọ kasị mma ime, kremovыe, peach na ude shades.
Ìhè anam-elu maka acha anụnụ anụnụ anya
Ìhè anam-elu maka anya agba aja aja
Makeup Nzuzo maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anya
Makeup aja aja ntutu anya